Jubbaland mise Jufoland? | Somali - Diaspora
Jubbaland mise Jufoland?
April 25, 2013 |Moment Media ETHICS Taariikhdu waa been ma sheega, waxayna kaydisaa wixii la soo dhaafey iyada oo uga marag kacaysa ruux walba dersina baraysa. Dhacdo kastaa waxay leedahay mataane iyo mid lammaane la ah isu ekaanshaha iyo fal wadaagga awgeed.
Murti Soomaaliyeed ayaa tidhaahda: “Lixdan jir laguma helo qiimigaad laba jirkaawayday!” iyo “Waano Abuurisaa ka horraysay” waxaa muddooyinkan si aad ah u socda olole loogu magacdaray JIBBOOYINKA. Waxaan filayaa qof kasta oo Soomaali ah inuu yaqaanJIBBOOYINKA, khariirad ahaan meesha ay dhulka kaga taallaan, taariikh ahaan, deegaan ahaan iyo dal ahaanba halkay ku arooraan.
Ololahan ayaa waxaa wada dad sheeganaya inay yihiin deegaanka JIBBOOYINKA. Haddana,JIBBOOYINKA haddii wax laga weydiiyo waxay kuugu jawaabayaan, JIBBOOYINKA Soomaali oo dhan baa deggan. Markaad u sii dhabbogasho ee aad tidhaahdo, dadka ololaha wada kuwa doodaya, kuwa mudaaharaadaya, kuwa warbaahinta fadhiyaba waa hal Jufo ee maxaa helay bulshadii kale ee deegaanka ku noolayd? Wuxuu kuugu jawaabayaa waa joogaan. Balse, anagaa u hadlayna oo metelayna. Saw maahmaah Soomaaliyeed ma odhan jirin: “Af Jooga looma adeego addimo lo’aadna looma arooro” Haddii dadkii kale ee deegaanku aysan kula qabin hawsha aad waddo, miyeysan af duub iyo indho la’aan ahayn inaad ummad dhan dareenkooda iyo damacooda ka turjunto aan ku wakiilan?.
Waxaa inta badan deegaamada Soomaalida loo yaqaannaa magacyo badan. Waxaa magacyadaa ka mid ah: Hawd, Saraar, Nugaal, Guban, Ooggo, Deex, Dooy, Didib, Dooxo, Dhoobeey, Sool, Doollo, Ciid iyo Waamo. Dhulkan Soomaaliyeed ee magacyadaas leh, deegaan weliba wuxuu leeyahay af guri lagu yaqaan, oo u gaar ah dadka deegaankaasina ku caan yahay, oo markiiba lagu soo qabto. Waxyaabaha qosolka leh ayaa waxaa ka mida dadka ku doodaya JIBBOOYINKAinuusan ku jirin qof aad ka maqlayso Af guriga ama dhawaqa reer WAAMOODKA lagu yaqaan. Hadalka waxay ku billaabayaan: “Eegga Dowladdu waa inay Oggolaataa Maamulka dadka deegaanka, ama Hadde dowladdu waxay diidan tahay, maamulka dadka deegaanka, ama dee maxaa dowladda ka galay maamulka dadka deegaanka Jubbooyinka?”
Duullaankii ayaa la galay, nasiib wanaag waxaa guulaystay Nacaska reerkoodii, ka dib iyadoo xoolihi Akshinkii Geel, Lo, Gammaan iyo Saanaddii la kala guranayo ayuu wuxuu helay nacaskiiCatir waayo wuxuu maqlayey subaxnimadii hooyadii oo naadinaysa Catir, markaasuu la booday, nin ay ilma Adeer yihiin ayaa qabtey oo yidhi: War heedheh, Catirta iska dhig, oo xoolaha wax ka kaxayso!” Nacaskii wuxuu la soo boodey hay Sasaban! Waa dardaarankii hooyadii” Catirtii ayuuna meesha kala tegay.
Waxaa bulshada Soomaaliyeed muddo dheer farta ku fiiqayeen deegaammada Bartamaha iyo Koonfurta Soomaaliya. Gaar ahaan Caasimadda oo halku dhig laga dhigtay, dadka deegaammadaasi ma rabaan dowladnimo. Dhaliishaasi waa jirtey oo ma ahayn mid caad saaran yahay sababtey doontaba ha lahaatee. Waxaana waqtigaas deegaammadaas ka talinayey, Hoggaamiye kooxeedyo mid weliba meel qaytey oo doonayey inuu ku amar ku taagleeyoo, isaga oo aan wax xidhiidh iyo wada noolaansho la lahayn kan deriskiisa ah, oggolayna inay umaddu hesho nidaam, kala danbayn iyo dowladnimo. Maantana waxaa dalka ka jira MOORYAAN CUSUB, waxaana kow ka ah,PUNTLAND iyo JUFOLAND iyo kooxda dhinaca Saxaafadda iyo borobagaandada u qaabilsan eeSAHAL. Haddaba MOORYAANTAN cusub ayaa waxay hal ku dhig ka dhigteen saddex arrimood oo aad mooddo yar iyo weyn Sheekh iyo Shayb, Rag iyo dumar inay is xifdisiyeen sidan:
Sida aan ognahay waxaa dowladda hadda jirta soo dhisay Golayaasha Dhaqanka Beelaha Soomaaliyeed oo muddo ku hawlana. Waxaa la ansixiyey Dastuur lagu qasbanaa oo la yidhi iyadoo la aqriyin ha la ansixiyo. Waxaa sidoo kale jira qodobbo dib loo dhigay ka doodistooda iyo ka wada xaajoodkooda, loona madax banneeyey Baarlamaanka la dooran doono [Kan hadda dhisan] waxaa la soo xulay xildhibaano, waxaana xildhibaannadii doorteen Madaxweyne, iyada oo cid walba iyo reer weliba si wadajir ah ay ku doorteen Madaxweynaha hadda Jira, isna wuxuu soo Magacaabay Ra’iisalwasaare. Caarlamaanku wuu ansixiyey.
Wuxuu soo magacaabay Wasiirro kooban oo tiro yar, waxaa mar saddexaad sidoo kale lagu ansixiyey si wadajira. Intaasoo oo marxaladood waxaa looga gudbayey sheekadii LOOMA DHAMMA ahayd ee ina daashatey 20ka sanno. Bulshada caalamkuna waxay qayb ka qaaddatey hirgelinta dowlad aan ahayn ku meelgaadh. Haddaba, kuwo dhaliilaya dowladda iyaga oo doonaya damac BEELAYSAN oo lagu saleeyey Dastuur, waxaa keliya Dastuurkii laga soo qaatey Qodobka laba Gobol iyo ka badan, aaway qodoBbadii iyo farqadihii kale ee kala sarreynta awoodda dowladda iyo tixgelinta awaamiirta Madaxda Dowladda in sharcigu sarreeyo, nidaam iyo kala danbeyn la’aan lagu sameeyey maamul saw noqon maayo, Hal Booli ah Nirig xalaal ah ma dhasho!
Haddaba Dastuurka lagu meeraalaynaysanayo muxuu ka qabaa maxayse dhigayaan Qodobbada Dastuurka Federaalka ah? Marka aad eegto Dastuurka Dalka Soomaaliya waxaa ku qoran Qaybta shanaad, Qodobka 69aad Farqada Koowaad awooda Dowladda Federaalka ah. Sidoo kale qodobka 70aad ayaa wuxuu sheegaya awoodaha Dowlad Goboleedka. Haddaba miyaanay dadka sheeganaya aqoonyahannada iyo waxgaradka ee magacyada badan sida: “Dr,Prof, Gen, Eng, Col iyo Shiikh” miyaanay aqriyin oo fahmin Qodobbada Dastuurka?Miyeysan Ogeyn hawsha ay wadaan inay tahay mid qaran dumis ah oo Dastuurkii laysla oggolaaday dhinac maraysa, ileen maaha keliya in ciwaan iyo halqabsi laga dhigto Qodobka 64aad Farqada 6aad 2 Gobol iyo ka badan ayaa Maamul Goboleed dhisan kara, ee waxaa Dastuurku qeexayaa, Awoodaha, Habka kala xadeynta degmooyinka iyo Gobollada, kala xadeynta awoodaha dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada. Haddaba, miyaanay habboonayn in kuwan ku indho beelay halka qodob in loo furo goobo lagu wacyigeliyo laguna baro dastuurka dalka.
Is faham la’aan iyo shaki soo kala dhexgalay dowlada federaalka Soomaaliya iyo Itoobiya Faroole wuxuu sheegay in maamulkiisa Puntland aanu gorgortan ka geli doonin hirgelinta nidaamka federaalka ee dastuurka cusub qeexayo